Inkqubo ye-China ICE Industrial Reverse Osmosis yeNkqubo yokuPholisa iNqaba yaManzi yoMvelisi kunye noMthengisi | Yubing
Inkqubo ye-ICE yeRevenue Reverse Osmosis yeNkqubo yokuPholisa iNqaba yaManzi
Ukubuyela umva kwi-Osmosis / RO yitekhnoloji esetyenziselwa ukususa izinto eziqinileyo ezinyibilikisiweyo kunye nokungcola emanzini kusetyenziswa inwebu ye-RO engagungqiyo evumela ukuhanjiswa kwamanzi kodwa ishiye uninzi lwezinto eziqinileyo ezichithakeleyo kunye nezinye izinto ezingcolisayo ngasemva. Inwebu ye-RO ifuna ukuba amanzi abe phantsi koxinzelelo oluphezulu (ngaphezulu koxinzelelo lwe-osmotic) ukwenza oku
Yintoni iReverse Osmosis?
Amanzi adlula kwi-membrane ye-RO kubhekiswa kuwo njenge- "permeate" kwaye iityuwa ezichithakeleyo ezaliwe yimbumba ye-RO kubizwa ngokuba yi "concentrate". Inkqubo eqhuba kakuhle ye-RO ingasusa ukuya kuthi ga kwi-99.5% yeetyuwa ezingenayo ezichithakeleyo kunye nokungcola.
Inkqubo yoNyango lwaManzi ye-Osmosis RO
Umzi mveliso wezityalo ezibuyisela umva osmosis ubandakanya isicoci se-multimedia ngaphambili, isithambisi samanzi okanye inkqubo ye-dosing anti-scalants, inkqubo ye-de-chlorination dosing, iyunithi ye-osmosis ebuyisela umva ngeembambo ezinokuvumeleka, kunye ne-UV sterilizer okanye ipost chlorine njengonyango lwasemva. Oomatshini be-RO basebenzisa itekhnoloji ye-reverse osmosis ngokuhambisa amanzi okondla nge-multimedia pre-filter ukuze kususwe amasuntswana amakhulu kune-10-micron. Emva koko amanzi atofelwe ngemichiza yokulwa ukunganyamezeleki enokubangela ukonakala kwimbumba yomatshini we-RO. Olu khetho langaphambi kokunyanga lunamandla okususa ubunzima, i-chlorine, ivumba, umbala, isinyithi, kunye nesalfure. Amanzi ke ayaqhubeka ukuya kwiyunithi ye-osmosis ebuyela umva apho impompo yoxinzelelo oluphezulu isebenza koxinzelelo olukhulu kwisisombululo esigxile kakhulu, yahlula-hlula iityiwa, iiminerali kunye nobumdaka obungenakubanjwa ngaphambili. Amanzi amatsha, aselwayo aphuma kwisiphelo esinoxinzelelo olusezantsi lwenwebu ngelixa iityiwa, iiminerali kunye nokunye ukungcola kukhutshelwa kumjelo kwelinye icala. Okokugqibela, amanzi adluliswa ngesicoci se-UV (okanye ipost chlorine) ukubulala naziphi na iintsholongwane kunye neentsholongwane ezikhoyo emanzini.
Isikhokelo sokuThenga iNkqubo yokuThengisa iOsmosis
Ukuze ukhethe imveliso eyi-RO echanekileyo, makunikwe le ngcaciso ilandelayo:
Umgangatho wokuhamba (GPD, m3 / usuku, njl.
2. Ukutya kwe-TDS kunye nohlalutyo lwamanzi: olu lwazi lubalulekile ekuthinteleni inwebu ekungcoleni, kunye nokusinceda ukuba sikhethe unyango oluchanekileyo lwangaphambili.
3.Iron kunye ne manganese kufuneka zisuswe ngaphambi kokuba amanzi angene kwi-reverse osmosis unit
I-4.TSS kufuneka isuswe ngaphambi kokungena kwinkqubo ye-Industrial RO
5. I-SDI kufuneka ibe ngaphantsi kwe-3
6.Amanzi kufuneka angabikho kwioyile kunye negrisi
7. I-chlorine kufuneka isuswe
Amandla ombane afumanekayo, isigaba, kunye nobuninzi (208, 460, 380, 415V)
9. Ubungakanani bendawo eqikelelweyo apho iNkqubo ye-Industrial RO iya kufakwa khona
Egqithileyo Inkqubo ye-ICE yokuSebenza ngokuPhakamileyo yokuSasaza yokuSasazwa kweTowers
Okulandelayo: Inkqubo yokuCocwa kwaManzi ye-ICE yokuPholisa iNqaba yaManzi
Izixhobo zokubuyisela umva kwi-Osmosis yezixhobo
Icebo lokucoca ulwelo amanzi Industrial
inkqubo yokucoca amanzi yokucoca i-RO
Inkqubo yokucoca amanzi kwi-Industrial RO
Izixhobo zokucoca amanzi kwi-RO
Inkqubo ye-RO yokupholisa inkqubo yenqaba yamanzi
Umcoci wamanzi we-RO wokupholisa inqaba
Unyango lwamanzi lwenkqubo yokupholisa
ICE MBR ndizayo Imodyuli of Industrial Wastewate ...
Inkqubo ye-ICE yokuSebenza ngokuPhakamileyo kweSanti yokuCoca ...